Hanomboka ny asabotsy maraina ny fetin'ny rano Thingyan ao Myanmar
Home » Vaovao momba ny dia an-kolontsaina » Hanomboka ny asabotsy maraina ny fetin'ny rano Thingyan ao Myanmar
Nanomboka ny fety nentin-drazana Thingyan nentim-paharazana tany amin'ny faritra Myanmar sy ny fanjakana an-toerana.
Ny praiminisitra ao amin'ny faritra Yangon, U Phyo Min Thein, dia nanolotra ny firarian-tsoa ho an'ny vahoaka amin'ny alakamisy zoma ho an'ny fetin'ny rano sy ny taona vaovao.
Fetiben'ny rano Thingyan dia haharitra hatramin'ny 16 aprily ary hianjera amin'ny 17 aprily ny taona vaovao, izay nanapa-kevitra ny vahoaka Myanmar fa hamadika ravina vaovao ary hamela loza amin'ny taon-dasa.
Ny trano fivarotana rano ao amin'ny faritra Yangon dia natolotry ny praiminisitra manoloana ny lapan'ny tanàna any amin'ny tanànan'ny tanànan'i Yangon.
Ny lanonana fanokafana dia narahin'ny fampisehoana nataon'ny tropy mpandihy nentim-paharazana Myanmar tamin'ny akanjo miloko miaraka amin'ny mozika Thingyan.
Fankalazana manokana misy ny “Walking Thingyan Festival” dia nankalazain'ny olona mandehandeha eraky ny tanàna ihany koa mba handray ny fanariana rano avy amin'ny pandala izay anipazan'ny olona rano amin'ny fantsona.
Mandritra izany fotoana izany, ny Lehiben'ny Minisitry ny Faritra Mandalay, Dr. Zaw Myint Maung, dia nanolotra fomba amam-panao fomba fitorahana rano any amin'ny tanàna lehibe faharoa any Mandalay, izay nitaky fandriampahalemana sy fampandrosoana ara-tsosialy sy ara-toekarena manerana ny firenena nanomboka ny taona vaovao.
Anisan'ireo fetibe 12 fizaran-taona ao Myanmar mandritra ny taona, ny fetin'ny rano Thingyan no maneho ny fety lehibe indrindra izay heverina fa hitondra fandriampahalemana sy fanambinana ho an'ny rehetra.
Mankalaza fety nentin-drazana Thingyan isan-taona ny vahoaka Myanmar mba hankalazana ny taona vaovao toy ny firenena Azia atsimo atsinanana toa an'i Songkran any Laos sy Thailand ary koa Chaul Chnam Thmey any Kambodza.
Ao anatin'ny fankalazana ny fetibe dia mifampifampisika sy mifampisotro rano ny olona mba hanasana ny fahotana sy hanadiovana ny fahalotoana ara-pitondrantena hatramin'ny taona taloha.
NY zava-pisotro NY divay NY: Tantara sy hybrida
Mpandeha 55.9 tapitrisa: tafakatra 5.8% ny fifamoivoizana ataon'ny mpandeha amin'ny seranam-piaramanidina Portiogey